Ny fitsangatsanganana any UAE, ao anatin'izany i Dubai, India, ary firenena 14 hafa dia misy sazy henjana ho an'ny Saodiana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Arabia Saodita » Ny fitsangatsanganana any UAE, ao anatin'izany i Dubai, India, ary firenena 14 hafa dia misy sazy henjana ho an'ny Saodiana
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana UAE • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Amin'ny andron'ny COVID-19 dia misy karazana fifandraisana roa eo amin'ny firenena. Na dia tsara aza ny fifandraisana eo amin'i Saudi Arabia sy ny UAE mpifanila vodirindrina aminy, ny COVID-19 dia nandrara ny fitsidihan'ny olom-pirenena Saudi Arabia Saodita an'i Dubai, Abu Dhabi ary ny sisa amin'ny Emira Arabo Mitambatra - ary henjana ny sazy.
The Kingdom of Saudi Arabia dia firenena iray Olona 35,393,638 522,108. Hatramin'ny androany dia 19 saodiana no nahatratra ny COVID-8200 ary XNUMX no maty.
Arabia Saodita dia eo amin'ny toerana 126 manerantany manoloana ireo firenena voadona indrindra eto an-tany amin'ny alàlan'ny COVID ary isa 118 raha oharina amin'ny taha maty.
Neigboring UAE sy firenena 15 hafa dia tsy ao anaty lisitra mena tsy natao ho an'ny olom-pirenena Saodiana misy sazy henjana napetraka ho an'ireo mpandika lalàna.
Amin'izao fotoana izao, Arabia Saodita 11,379 19 no voan'ny COVID-1,406 ary tranga XNUMX XNUMX no naiditra hopitaly.
Ny herinandro lasa teo dia nisoratra anarana 8,824 8,324 ny fanjakana vaovao, 6 85 tamin'ny herinandro teo, izay nisy fisondrotana 95%. Olona 11 no nandalo, raha ampitahaina amin'ny XNUMX herinandro lasa izay, izay fihenan'ny XNUMX%.
20% ny olom-pirenena Saudi Arabia Saodita vita vaksiny feno rehefa nahazo ny tifitra roa, 33% hafa kosa no nahazo ny fatra voalohany.
Emirà Arabo Mitambatra mpifanolo-bodirindrina aminy dia manana vaksiny feno 69% ny olony ary 8.5% fanampiny no nahazo ny fatra voalohany.
Etazonia raha ampitahaina dia nanao vaksiny 49% miaraka amin'ny fanampiny 7.8% nahazo ny fitifirana voalohany.
Ny Fanjakana Saudi Arabia kosa dia manana ny Emirà Arabo Mitambatra miaraka amina lisitra mena manao ny fitsangatsanganana any Emirates ho heloka bevava.
Libya, Syria, Lebanon, Yemen, Iran, Turkey, Armenia, Ethiopia, Somalia, Congo, Afghanistan, Venezoela, Belarus, India, ary Vietnam dia ao amin'ny lisitra mena Saodiana ihany koa
Izay olom-pirenena Saodiana tratra mandeha any amin'ny firenena lisitra mena dia mbola miatrika famaizana hatrany, anisan'izany ny fandrarana ny dia mandritra ny telo taona.
Niantso ny olom-pirenena ny minisitera mba tsy handehanana mivantana na ankolaka amin'ireo firenena misy lisitra mena izay mbola tsy voafehy ny areti-mifindra ary misy ny fitomboan'ny tranga voan'ny coronavirus miovaova.
Nanentana ny olom-pirenena koa izy mba hitandrina sy hanalavitra ireo faritra misy ny tsy fandriam-pahalemana na ny viriosy, ary handray ny fepetra fitandremana rehetra na aiza na aiza toerana alehany.
Arabia Saodita dia mampiasa vola be ankehitriny amin'ny fananganana indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ary amin'ny fanohanana an'izao tontolo izao amin'ny Dolara an'arivony tapitrisa manohana ny sehatry ny fizahan-tany.
Ny UNWTO, WTTC, ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ary ny Crisis Management Center dia nanokatra birao rehetra ao amin'ilay Fanjakana. Rehefa mila fanampiana ny tontolon'ny fizahan-tany, Saudi namaly ny antso, nametraka ny Fanjakana eo amin'ny toeran'ny mpitarika manerantany amin'ity sehatra ity.
Ary koa ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany any amin'ireo firenena GCC hizay nanatri-maso fitomboana goavambe tao anatin'ny taona vitsy lasa.
Ny Saodiana Toko an'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany dia nanangana ny Vondrona fizahan-tany Saodiana fandraisana an-tanana.